Ciyaaraha | Mustaqbal Radio | Page 2
RW Kuxigeenka Dalka oo Shir gudoomiyay Kulan looga hadlayay Fatahaada Wabiyada.
Wasiirka amniga, Taliyayaasha Ciidamada iyo Duqa Muqdisho oo kulan degdeg ah ka yeeshay Roobka ka da’aya Muqdisho.
Ra’isalwasaaraha Itoobiya oo 1,000 maxaabiis Itoobiyaan ah ka daayay Sucuudiga
Somaliland oo beenisay eedeynta Puntland ee taageerada AL-shabab
Amniga Baydhaba oo la adkeeyay
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha (page 2)
Inter Milan oo qorsheyneysa inay lasoo wareegto xidig ingiriska ka ciyaaro .
Kooxda Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay ku fikireyso inay dalab ka gudbiso xiddiga khadka dhexe ee Manchester City Ilkay Gundogan. Sida laga soo xigtay wargeyska Corriere dello Sport, Nerazzurri ayaa u dhaqaaqi doonta xidiga reer jarmani hadii ay u soo baxaan Champions League, Mustaqbalka Gundogan ee Etihad Stadium ayaa shaki la galiyay iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ...
Kooxda Barcelona Oo Guul Fudud Ka Gaartay Kooxda Mamelodi Sundowns Kulan Lagu Xusayay Dhalashadii 100-aad Ee Nelson Mandela.
Kooxda Barcelona ayaa guul ka gaartay kooxda Mamelodi Sundowns kana dhisan horyaalka Koonfur Africa kulan saaxiibtinimo ahaa oo lagu xusayay dhalashadii 100-aad ee Madaxweyinihii hore ee dalka koonfur-Africa ee Nelson Mandela. Valverde ayaa kulanka ku soo galay laba shax oo kala duwan isaga oo qaybtii hore ee ciyaarta ku soo galay shax qaybtii dambe-na shax kale ku soo galay. Kooxda ...
Atletico Madrid Oo garaacday Marseille kuna guuleysatay koobka Europe League-ga.
Atletico Madrid ayaa ku guulaystay koobka Europe League iyada oo u awood sheegatay kooxda Marseille kulan ka dhacay Groupama Stadium. Kulanka ayaa si xiiso leh ku bilowday iyada oo y labada kooxoodba isku qaadayeen weeraro ay ku doonayeen in ay goolal ku dhaliyaan. Atletico Madrid ayaa dhan ahaan daafac ku jirtay halka ay kooxda Marseille qaadaysay weeraro rogaal celis ah ...
HORDHAC: Marseille Vs Atletico Madrid iyo xaqiiqooyinka kulankan.
Garoonka Kooxda Lyon ee Groupama Stadium ayaa marti galin doona Finlka Europe League xilli ciyaareedka 2017/2018 kaas oo dhex mari doona kooxda reer France ee Marseille iyo kooxda reer Spain ee Atletico Madrid. Kulankan ayaa si weyn isha loogu hayaa iyada oo laga daawan doono adduunka oo dhan maadama ay labada kooxoodba kulanka u soo galid oonaan sidii ay ugu ...
Tabaabaraha Cusub Ee Xulka Qaranka Italy Ee Roberto Mancini Oo si Maldahay u tilmaamay in Bolotteli uu xulka ugu yeeridoono.
Tababaraha cusub ee xulka qaranka Italy ee Roberto Mancini ayaa ku dhaw in uu Mario Balotelli dib ugu yeero xulka qaranka Italy kadib markii uu tababarihii hore ee kooxda Man city si Rasmi ah loogu soo bandhigay saxaafada. Balotelli oo haatan jooga kooxda Nice ayaan xulka qarankiisa u ciyaarin tan ilaa 2014 koobkii adduunka ee Brazil ka dhacay. Laakiin Mancini ...
Cristiano Ronaldo iyo Carvajal Oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Real Madrid.
Tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayuu war fiican u soo baxay. Kaliya labadii xiddig ee dhaawaca uga maqnaa kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo iyo Dani Carvajal ayaa maanta si buuxda u dhamaystay tababarka buuxa ee uu bixiyo tababare Zidane. Labada xiddig ayaa ku bilaaban doona kulanka Finalka champions League waxana ay haystaan 10 maalmood oo ay si fiican ...
Liverpool oo xiiseyneysa weraryahan ka ciyaara gudaha ingriska.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham United Manuel Lanzini ayaa wali diirada u saaran Liverpool. Lanzini ayaa xilli ciyaareedkii hore ku soo bilowday laakiin xidigan ayaa weli dhaliyay shan gool, lixna caawiye ka ahaa 27 kulan oo Premier League ah. Xiddiga reer Argentine ayaa labo sanno ka hartay qandaraaskiisa ayaa horay u soo jeediyay inuu ku faraxsan yahay garoonka London ...
Mousa Dembele Oo Qarka U Saaran Inuu Ku Biiro horyaalka Chine Super League.
Xiddiga Tottenham Hotspur Mousa Dembele ayaa lagu soo waramayaa iney xiiseynayo kooxda heysata horyaalka Chinese Super League. Dembele ayaa lixdii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay u saftay 40 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan. Si kastaba, sida laga soo xigtay jariiradda The Sun, Dembele ayaa laga yaabaa inuu xagaaga ka tago kooxda ka dhisan Premier League xagaagaan iyadoo laacibkana ay ...
Pep Guardiola Oo loo magacaabay Tababaraha sanadka Premier League-ga.
Tababaraha Kooxda Man city ee Pep Guardiola ayaa ku guulaystay laba abaalmarinood xafladii xalay la qabtay kadib markii uu kooxda Man City ku hogaamiyay horyaalka premier League. Guardiola ayaa ku guulaystay tababaraha ugu fiican sanadka horyaalka premier League iyo waliba tababaraha ugu fiican ee Abaalarinta LMA. Kadib markii uu ku guulaystay abaalmarinta Guardiola ayaa yiri”Waxa aan doonayaa in aan abaalmarintan ...
Xulka Germany oo soo saaray Liiska Xiddigaha kaga qeyb galaya Koobka Adduunka.
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Liverpool ee Emre Can iyo xiddiga kooxda Borussia Dortmund ee Mario Gotze ayaa laga saaray liiska hordhaca ah ee xulka qaranka Germany ee koobka adduunka Russia 2018. Xiddiga Liverpool oo uu heshiiskiisu dhacayo xagaaga ayaa la dhibaatoonaya dhaawac dhabarka ah isaga oo aan xitaa ka qayb qaadan karin finalka champions League. Can ayaan wali si ...
RASMI: Roberto Mancini oo loo magacaabay tababaraha xulka taliyaniga.
Xiriirka Kubada cagta Italy ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqay in ay tababare cusub u magacaabeen Roberto Mancini kaas oo xulka qaranka Hogaamin doona. Kadib markii uu Roberto Mancini heshiis la gaaray kooxda Zenit in la kansalo heshiiska tababaraha ayuu u soo duulay Rome si uu wadahadalo ula qaato maamulka xulka. Xiriirka ayaa haatan si Rasmi ah ugu dhawaaqay in ...
Barcelona Oo Ku dhaw qaadashada Antoine Griezmann.
Kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay aqbaleen heshiis 100 milyan oo ginni ah oo ay ku doonayaan Antoine Griezmann oo ku aadan Camp Nou. 27 jirkaan ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Blaugrana muddo bilooyin ah, taasoo keentay in Atletico ay si caddaalad ah u dhaleeciso kooxda Catalans si ay ugu sii heystaan weeraryahanka. Sida laga ...
Page 2 of 294«12345	»	102030...Last »
RW Kuxigeenka Dalka oo Shir gudoomiyay Kulan looga hadlayay Fatahaada Wabiyada. May 20, 2018
Wasiirka amniga, Taliyayaasha Ciidamada iyo Duqa Muqdisho oo kulan degdeg ah ka yeeshay Roobka ka da’aya Muqdisho. May 20, 2018
Saudi Arabia ‘to release 1,000 Ethiopian prisoners’- Aljazeera May 20, 2018
Ra’isalwasaaraha Itoobiya oo 1,000 maxaabiis Itoobiyaan ah ka daayay Sucuudiga May 20, 2018
Villarreal oo xalay taako u dhigtay Real Madrid. May 20, 2018
Somaliland oo beenisay eedeynta Puntland ee taageerada AL-shabab May 20, 2018
Amniga Baydhaba oo la adkeeyay May 20, 2018
Ciidanka AMISOM oo la barayo ka hortagga Qaraxyada Miinooyinka ah May 20, 2018
Absence of MPs in normal parliament sittings raise concern in the FGS May 20, 2018
Sawirro: Roob xalay ilaa saaka ka da’ay Muqdisho May 20, 2018
Former president Hassan Sh Mohamud calls on end to hostility in Tukarraq May 20, 2018
Tareen Shidaal waday oo ku rogmaday Mombasa,Sawirro May 20, 2018
Ramadan Kareem WARKA HABEEN. رمضان كريم https://t.co/S0Ih5poeNZ 7 hours ago
Waa Sidee Nolosha Dadka uu Guryohooda Baabi'iyay Roobka Tan iyo Xalay ka da'aya Magaalada Muqdisho? https://t.co/KzQUJlRC8V 8 hours ago
Wasiirka amniga, Taliyayaasha Ciidamada iyo Duqa Muqdisho oo kulan degdeg ah ka yeeshay Roobka ka da’aya Muqdisho. https://t.co/mmbScHQcNU 8 hours ago
Ramadan Kareem TARTANKA TABAARAK رمضان كريم https://t.co/NfIDvp2gRa 11 hours ago
Ramadan Kareem WARKA GALAB. رمضان كريم https://t.co/xb6t5or2Wb 12 hours ago
Saudi Arabia ‘to release 1,000 Ethiopian prisoners’- Aljazeera
Villarreal oo xalay taako u dhigtay Real Madrid.
Ciidanka AMISOM oo la barayo ka hortagga Qaraxyada Miinooyinka ah
Absence of MPs in normal parliament sittings raise concern in the FGS
Sawirro: Roob xalay ilaa saaka ka da’ay Muqdisho